Oday waayeel ah oo lagu dilay deegaan ka tirsan Ceelbuur & dilkiisa oo la isku tuurtuuray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Ceelbuur – Mareeg.com: Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in deegaan ka tirsan degmada Ceelbuur lagu dilay nin waayeel, oo ka mid ah dadka deegaanka.
Dilka waayeelkan 80 jirka ahaa ayaa Alshabaab ku eedeysay ciidamada Itoobiya, halka mas’uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda ay dilka odaygaas dusha u saareen xarakada Alshabaab.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Galguduud C/xakiin Cabdullahi Warsame ayaa waxaa sheegay in odayga waayeelka ah lagu dilay deegaanka Dab Qurun oo ku taal duleedka degmada Ceelbuur.
Wuxuu sheegay gudoomiye ku xigeenku in odaygaan oo la oran jiray Nuur Xeyle Dhicisoow AlShabaab dileen, sialamarkaan gubeen kadib markii sida uu yiri uu qaatay deeq ay ciidamada dowlada iyo kuwa Itoobiya u qeybiyeen dadka degaanka.
Bar Internet oo Alshabaab taageerta ayaa lagu qoray in odayga waayeelka oo la oran jiray Nuur Xeylle, islamarkaana caan ka ahaa deegaanada Dac iyo Dab-qurun ay dileen ciidamada Itoobiya, kadibna dab qabadsiiyeen.
Barta Alshabaab ayaa lagu qoray in ciidamada Itoobiya ku kaceen falkaan kadib markii sida la yiri lagu jeciyey dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday jidka u dhaxeeya Ceelbuur iyo Maxaas.
Warka la xaqiijin karo ayaa ah in la dilay oday wayeel ah, hase ahaatee lama hayo warar madaxbanaan oo xaqiijineysa cidda ka dambeysay dilka odaygaas.